Diyaarad ay leedahay Shirkada Diyaaradaha ee Ethiopian Airlines oo burburtay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDiyaarad ay leedahay Shirkada Diyaaradaha ee Ethiopian Airlines oo burburtay
Hiiraan Xog, Diyaarad ay leedahay shirkada Diyaaradaha ee Ethiopian Airlines oo u kusii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa la sheegay in ay bur burtay.
Afhayeen u hadlay shirkada Ethiopian Airlines ayaa Wakaalada Wararka ee Reuters u xaqiijiyay bur burka Diyaarada oo ka duushay magaalada Adis Ababa kuna sii jeeday magaalada Nairobi.
Diyaarada bur burtay waxaa la socday 149-ruux oo rakaab ahaa iyo sidoo kale 8-shaqaalaha diyaarada, waxaana la sheegay in diyaarada bur burtay waxyar kadib markii ay Adis Ababa ka duushay.
Warbaahinta Itoobiya ayaa ku waramay in diyaarada oo nuuceedu ahaa Boeing 737-800 MAX ku bur burtay Deegaanka Bishoftu oo 62-km u jirta magaalada Adis Ababa , waxaana goobtaasi gaaray gurmar xoogan.
Xafiiska Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa xaqiijiyay bur burka diyaarada Ethiopian Airlines , walina lama oga khasaaraha ka dhashay diyaaradan ku bur burtay duleedka magaalada Adis Ababa